Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Yago Aspas Child Story Plus Ihe na-enweghị isi akụkọ ndụ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "El Turco“. Anyị Jago Aspas Child Story and Unold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a metụtara ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị ọzọ a na-amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike o ji agba goolu. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Jago Aspas 'Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Mbụ na Ndụ Ezinụlọ
Malite, aha ya bụ Jago Aspas Juncal. A mụrụ Jago Aspas n'ụbọchị 1st nke August 1987 na nne ya, María Juncal González na nna, Urbe Aspas Martínez. Amuru ya na obodo Moaña, Spain nke amara maka oke osimiri na osimiri.
Banyere mmalite yaNa-ekpe ikpe site na ihu ya, onye ga-ahụ nke ọma na Jago nwere ụfọdụ ngwakọta nke ọdịdị ihu Spanish na Arabic. Site na Spanish, ọ dị ka Andrés Iniesta.
Dị ka akụkọ na-ekwenye ekwenye si kwuo, ezinụlọ Yago Aspas sitere na ndị Arab nke sitere na Lebanọn. Nke a na-akọwa ihe mere football football ji akpọkarị ya "El Turco".
Jago Aspas 'papa Urbe Martínez na nne na nna ya gbakọtara na Spen dị ka nwatakịrị. Taa onye ọ bụla n'ezinụlọ ya gụnyere Jago ghọrọ ndị ọcha dị ọcha nke Moab na Spain.
Ndị nne na nna Jago Aspas, Martínez na María na-enwe obi ụtọ maka ụmụ anọ ha karịsịa Jago bụ ndị ya na ụmụnne ya nile kwetara ka ha nwee ike ịga n'ihu football site na nwata.
N'ikwu okwu banyere nke ahụ, Jago Aspas toro na ụmụnne ya ndị nwoke atọ bụ n'aka ekpe; Jonathan, ya onwe ya, Pablo na Urbe bụ ndị okenye nke ụmụnne. Brothersmụnna niile malitere njem ịgba bọọlụ nwata ha na ụlọ ọgbakọ ha bụ CD Moaña.
Jonathan mechara gbaa bọl na Cyprus League. Urbe ghọrọ onye na-eche nche maka Alondras, otu otu egwuregwu bọọlụ nke dị na Cangas na obodo kwụ ọtọ nke Galicia, Spain. Urbe lara ezumike nká ma na-arụ ọrụ ugbu a dịka onye nyocha ụlọ nyocha na onye enyemaka na-enye aka. Pablo onye nke ọdụdụ nwalere ilekwasị anya na football mana enweghị ike ime ka ọ bụrụ ọkachamara.
Yago tolitere na nwanne nwanne ya, bụ Aitor onye na-anọchite anya obere ìgwè na mpaghara ha. Ọbụna nwanne nna ya Cristobal Juncal na-egwuri egwu na Celta. N'agbanyeghị ha niile, onye nwere ọtụtụ agwa bụ Jago Aspas nke anyị.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ọrụ na-ewuli Elu
“Nwatakịrị nwoke nke Moaña” dị ka a kpọrọ ya n'ụzọ ziri ezi n'oge ọ bụ nwata na agụmakwụkwọ Moaña nwetara ohere ịga ule na Celta agụmakwụkwọ, nnukwu ụlọ egwuregwu bọọlụ Spanish dị na Vigo, Galicia.
Yago ga-eme njem ihe dị ka kilomita iri na ise site n'ụlọ ya gaa Vigo iji gaa ikpe egwuregwu bọọlụ. Nke a bụ oge agụmakwụkwọ Celta de Vigo na-elekwasị anya banyere ịchọta ụmụaka nke ọgbọ ya.
Yago Aspas mgbe ọ rutere na Vigo zutere nnukwu nhụsianya mgbe ya na nne na nna ya na nwanne nna ya bụ ndị sooro ya na-agwa ya na ule nyocha bụ maka ụmụaka a mụrụ n'afọ 1986.
Apụghị m ịkwụsị ibe ákwá. Ekwenyesiri m ike na m ga-alaghachi n'efu. Kaosinadị, nwanne nna m, Cristobal Juncal mere ka m ghaara ha ụgha .. "Naanị gwa ha na ị dị afọ 86 na ọ bụ ya." N'ihi ya, m ghaara ha ụgha ma zụta ya. ”
Onye nyocha nke Celta de Vigo nwere ike ile anya Iago ihu ma kwenyesie ike na ya nwere ihe akaebe niile achọrọ iji mee ka nwatakịrị ahụ gaa ikpe ahụ. Jago Aspas lere anya otu afọ ma eleghị anya n'ihi ahụ ike ya. Ọzọkwa, a hụghị ikike ụkwụ aka ekpe ya.
N'ikpeazụ, Jago Aspas chere ule siri ike ihu ma enyeghị ya ozugbo. N'ịbụ onye a na-akwadoghị, ọ bụ oge mbụ ọ ga-egwu bọlbụ na-arụ ọrụ na-emepụta ihe ma ọ bụ na-emepụta ihe. Kama ịbịakwute akpụkpọ ụkwụ dị mma, Jago Aspas yi uwe akpụkpọ ụkwụ nke mere ka ọ daa n'ala mgbe niile. Ọ laghachiri n'ụlọ ma ọ bụghị kwenye na ọ ga-agafe ikpe ahụ.
N’ụzọ na-eju anya, ka ọkara otu awa gachara mgbe ya na nne na nna ya na nwanne nna ya lọrutere, ekwentị ahụ kụrụ. Ọ bụ ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ Celta na-akpọ ma na-agwa ndị mụrụ ya na akpọbatala nwa ha nwoke n'òtù ndị ntorobịa. Nke a hapụrụ ezinụlọ Yago Aspas jupụtara n'ọ joyụ na obi ụtọ.
Otú ọ dị, ha echetụbeghị otu ihe. Eziokwu ahụ bụ na ha ga-egosiputa akwụkwọ na-egosi na ọ dị afọ ọ bụla mgbe ha na-akpọ ya maka akwụkwọ aha. Nke a bụ mmalite nke egwu ọhụrụ ndị ezinụlọ Aspas ga-eche ihu.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Afọ na-atụ egwu na mmeri
Ndị nne na nna Jago Aspas, Martínez na María ka na-atụ egwu ka nwa ha nwoke kwadebere ịhapụ ụlọ maka agụmakwụkwọ. Egwu a sitere na oge Aspas nwanne Cristobar kpaliri nwa ha ịgha ụgha banyere afọ ndụ ya n'oge ikpe Celta. Otú ọ dị, e mere mkpebi. Ha niile kwetara ikwupụta afọ nwa ha nwoke na ịrịọ onye na-ahụ maka agụmakwụkwọ ka ọ ghara ịjụ nwatakịrị ha.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị na-ahụ maka nkà mmụta sayensị nke Celta anaghị eche maka ụgha Jago Aspas kwesịrị ibido n'isi ụtụtụ. Nke a bụ n'ihi na o kwenyesiri ike na ọ chọtara obere ọgụgụ isi na Jago. Dị ka mkpebi ikpe si kwuo, Aspas guzoro n'etiti ụmụntakịrị ndị ọzọ bụ ndị na-asọ asọ maka otu ebe ahụ n'eziokwu
Yago Aspas sonyeere mahadum Celta de Vigo na 1995 mgbe ọ dị nanị afọ asatọ. N'ụlọ akwụkwọ ahụ, bọl bọl bọl, ndụ ya na-eso ya n'ebe ọ bụla ọ na-aga.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ịga nke Aspas
Akụkọ Celta nke Jago mere obere mgbanwe nke football na ụlọ ya. Onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ Aspas nwere mmasị ịnwale ule ikpe ma kwaga Iago na Celta. N'ime ụmụnne niile, naanị Jonathan zutere ihe chọrọ ka ọ na-aga maka ule. N'ụzọ dị mma, Celta nakweere ya ma ụmụ nwoke abụọ ahụ ghọrọ ndị otu nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Celta.
Ebe ọ bụ na ndị nne na nna Aspas enweghị ụgbọ ala, a ghaghị itinye onye ọzọ iji mee ka ya na nwanne ya nwoke gaa ọzụzụ. Ha na-emefu ego na-efu site na isoro otu onye òtù ọlụlụ onye nna ya nwere ụgbọ ala.
N'ụlọ akwụkwọ ahụ, Chineke na-elebara ụmụnna abụọ ahụ anya dịka Chineke zigara ndị ọkà mmụta sayensị onye Aspas kwusịrị banyere afọ ndụ ya.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ịghọ Pro
Yago Aspas nwere ike ịgafe n'akụkụ nke Celta. O nwetara nkwado ya site n'ọtụtụ ọgbọ dị iche iche na agụmakwụkwọ. Egwuregwu ya, mmegharị ahụ, mmezigharị ya na ịdị mfe nke dribble mere Aspas nkwa siri ike maka ọdịnihu.
Na oge 2004-2005, Celta aghaghị iziga ya na Rápido Bouzas ebe o nwetara ogo dịka onye mmeri nke dị njikere ịghọ ọkachamara.
N'ikpeazụ, Jago nyere onye mbụ Celta reservation B na 2006 ya. Ọ kwagara na nke Celta mgbe ọ na-eso oge abụọ ebe ọ nọrọ ruo 2013 tupu Liverpool amalite ịkpọ.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Liverpool Misadventures
Aspas bịara England na-enwe olileanya na ọ ga-eme mgbanwe maka mgbanwe nke gburugburu ebe obibi. Okwu mbu o nwere siri ike imuta asusu bekee. Nke abụọ bụ eziokwu na ọ na-egwuri egwu nke abụọ nke Philippe Coutinho, Sterling, Sturridge na Luis Suárez. Aspas nwekwara nsogbu nke ike site n'aka onye otu na onye isi Steven Gerrard.
Steven Gerrard dere n'otu oge na akụkọ ọdịnala ya na ọ nwere obi abụọ banyere Aspas na o kwesịrị ekwesị na Premier League. Echiche a bịara mgbe mbụ ọ hụrụ ya na ụlọ mgbakwasa Liverpool. Gerrard ji ahụ́ ya tụnyere nke “nwatakịrị“. Ọ maghị na ya onwe ya na Aspas ga-etinye aka na okpueze nke mbụ ha nke Manchester City gafere n'aka Chelsea.
Yago Aspas mere ka anya anọ dị na Liverpool maka ihe mgbaru ọsọ efu. N'ụzọ dị mwute, e chetara ya maka ebe ọ na-atụghị anya ya megide Chelsea nke mere ka ịgba ọsọ na-agba ọsọ na njedebe nke ọzọ.
Mmehie ya mebiri nrọ ndị Liverpool. Mmehie a mere ka Jagoago Aspas kpọọ aha n'etiti ndị egwuregwu kachasị njọ ịnọchite anya Liverpool n'oge Premier League.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Nsogbu na Sevilla
Sevilla nyere ya akwụkwọ mbinye ego iji laghachi azụ na Spen, ma ịlaghachi n'obodo ya egosighi na ọ na-enwe obi ụtọ karị na pitch maka Spaniard.
Na 12 June 2015, Sevilla si n'aka Liverpool banye Aspas dịka akụkụ nke nkwekọrịta ahụ n'etiti okpukpu abụọ ahụ, weere ya ozugbo na Celta n'otu ụbọchị ahụ na ụgwọ ọnụahịa.
Yago Aspas Sevilla jụrụ na ire ere ka Celta bịara mgbe e jidere ya na igwefoto na-enwe mkpesa ọjọọ na Unai Emery na dugout na otu egwuregwu ha.
Site na mgbe ahụ, otu ihe bụ ihe doro anya maka Jago. Ọ ghaghị ịlaghachi na mgbọrọgwụ ya Celta Vigo ebe ebe njem ụkwụ ya malitere.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ịlaghachi n'ụlọ
Yago bịara n'ụlọ, laghachi Galicia na Celta ọ hụrụ n'anya ebe ndị Celta na-ekele ya mgbe ọ na-ekwu ya. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ime ihe ziri ezi, ọ bụghị oge ọzọ ma ugbu a.
Tupu egwuregwu mbụ ya, Yago kpere ekpere ka chi nke football wee zaa ekpere ya site na ịme ya ka ọ bụrụ onye na-esote ọganihu.
Site n'oge ahụ, ọ biliri n'oge ahụ ka ọ bụrụ onye na-egbu mmadụ na Spanish.
Yago Aspas ghọrọ onye na-eche ihe mgbaru ọsọ na ihe mgbaru ọsọ na ọ ga-aga n'ihu ememe ihe ọ bụla, ọbụlagodi igwefoto zoro ezo ezoghị. A mara ya ikpe nke ọma.
Yago gara n'ihu merie onye ọkwọ ụgbọala La Liga nke ọnwa nke ọnwa 2016 site na anya nke anya Lionel Messi na Christiano Ronaldo ndị kacha mma n'ụwa. Nke a mezuru ka ndị otu mba ndị Spain na-akpọ ya.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ịdakwunye Liverpool Scars
Yago weere ya na Spen na ihe nkiri na-egbuke egbuke megide England na Wembley. Lelee vidiyo n'okpuru;
Dika akuko si kwuo, o mere nke a iji gosiputa na o nweghi ihe ojoo site na afo obi ojoo na Liverpool.
Onye nhazi ya megide England hụrụ ndị na-agba egwuregwu football na-agba gburugburu ya dị ka sharks ma na-achọ ọrụ ya n'ebe ndị ọzọ. N'agbanyeghị nke a, Aspas kwupụtara na ọ chọghị ime otu ihe ahụ site n'ịhapụ Celta ọzọ. Nke a bịara n'otu oge, ndị Celtan na ndị Spanish na-anabata ya.
“Obi dị m ezigbo ụtọ ebe a, yana ndị m. N'ebe a na Celta, mụ na nwa m nwoke, nwunye m, nne na nna m nọ, na nke ahụ bụ ihe ego enweghị ike ịzụta. Echere m mgbe niile igwu egwuregwu Celta, ọ bụkwa ebe ahụ ka m chọrọ ịla ezumike nká. ”
Kemgbe oge a, a na-ahụ Jago Aspas dịka dike dike.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
O doro anya na Jago Aspas bụ akụkọ Celta Vigo. Igwuri egwu ya na ụdị ndụ ya na pitch ga-enyere gị aka ịmepụta ya n'ụzọ zuru ezu. Tupu ụbọchị nhụjuanya ya na Liverpool na Sevilla, Aspas na ezigbo enyi ya nwanyị na ihe nlereanya Jennifer Rueda nọ.
Dị ka ụzọ nke na-ekwuDaalụ”Maka ịnọnyere ya site na oge ọgba aghara ya, Jago na 2017 gwara ọmarịcha enyi ya nwanyị. Ekwuputara njikọ ahụ site na peeji nke Instagram nke Jennifer. Ozugbo ahụ, atụmatụ agbamakwụkwọ ha malitere.
Tupu agbamakwụkwọ ha, Jennifer Rueda dị ime nwa ha nwoke. Ememme ahụ ga-echere ruo mgbe nwa ha nwoke aha ha kpọrọ Thiago. Ọ bụ ememe agbamakwụkwọ onwe onye nke mere na Moaña, obodo obodo Jago.
Yago na Jennifer na-enwe afọ ojuju ugbu a ka ha na-enweta ọ joụ nke ịbụ nne na nna. Inwe Thiago na icho nwa ozo bu ihe di nkpa obi uto na mpako maka di na nwunye.
Nna na Nwa mmekọrịta: Ọ bụrụ na ndị nna abụghị ihe nlereanya nye ụmụ ha, onye bụ? N'ịchọ ilekọta omume nwa ya na omume ya, Jago chọrọ ka nwa ya bụrụ onye na-eme nke ọma karịa ya.
Nwoke ọ bụla nwere ike ịbụ nna. Ọ na - ewe onye pụrụ iche dịka Jago Aspas ka ọ bụrụ nna nke ga - eji oge buru ibu wepụ nwa ya nwoke. Thiago nwere aka nna ya na azụ ya.
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ezigbo Ndụ Onye
Jago kwuru otu oge “Ndụ pụrụ ịdị ebube” ka o gosipụtara porsche ya na Lamborghini na akaụntụ mgbasaozi ya. O nwere otu n'ime ụgbọ ala kachasị dị oké ọnụ ahịa nke ụfọdụ ndị a ma ama na bọọlụ ụwa.
Yago na-ahụ osimiri Moaña dị ka ala egwu ya. Obodo a dị na Spen na-ewetara ya ihu ọma.
Food: N'ikwu okwu banyere nri, Jago hụrụ Pizza n'anya site n'oge ya na Liverpool.
Ọ na-enwe mmasị na ụlọ ihe nkiri, na-eme ememe, na-enwe mmasị ma na-ekpori ndụ na ndị enyi
Jago Aspas Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Video Nchịkọta
Nyochaa: Daalụ maka ịgụrụ anyị Jago Aspas Child Story and Unlimited Information Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.